Xildhibaano ku dhawaaqay Kudlada Badbaadinta Qaranka -
Kongreska Maraykanka oo ansixiyay dhaqaale lagu caawinayo dadka uu saameeyay Covid…
Inkabadan 300 oo ruux oo laga helay 48kii saac ee ugu…
Bangiga dhexe ee Soomaaliya oo markii ugu horraysay bixiyey Ruqsadda Adeegga…
Madaxweynaha Puntland Deni oo ka hadlay weriye u xiran maamulkiisa
Ilhan Cumar oo ku baaqday in cunoqabatayn lagu soo rogo Dhaxalsugaha…
Joe Biden’s firm but cautious message to Iran
The President of Armenia rejects Prime Minister Pashinyan’s order to dismiss…
UK invites WW2 vet and Covid-19 fundraising hero Captain Tom Moore
Iraqi Kurdistan Prime Minister Barzani: Rocket attack on US base in…
School children abducted in the Nigerian state of Niger 10 days…
Home News Xildhibaano ku dhawaaqay Kudlada Badbaadinta Qaranka
Xildhibaano ku dhawaaqay Kudlada Badbaadinta Qaranka
Qaar ka mid ah xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho maanta waxa ay ugaga dhowaaqeen Kudlada Badbaadada Qaran.
Kulanka loogaga dhowaaqay Kudladan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa inku dhow boqol xildhibaan waxaana looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, doorashada dhaceysa iyo marxalada kala guurka ah ee dalka.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah Golaha Shacabka u akhriyay war saxaafadeed ay soo saareen xildhibaanada.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha xilligiisii dhamaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu ku fashilmay inuu dalka ka qabto doorasho, sidoo kalena uu la heshiin waayay madaxda dowlad Goboleedyada.
“Ma aqbali doono in Madaxda dowladda sameeyaan muddo kororsi, xukuumadana waa mid xil gaarsiin ah oohowlo caadi ah qaban kara ha yeeshee arrimo dastuuri ah ma qaban karaan.”ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid xildhibaanada mucaaradka.
Ku dhowaaqista kudladan ayaa ku soo beegmeysa kadib markii maanta uu afhayeenka xukuumada Maxamed Ibraahin Nuur uu sheegay in dowlada ay ka shaqeyneyso sidii doorasho dalka uga dhici lahayd.
Previous articleA video of Russian police physically humiliating the journalist is causing online screams
Next articleFrench expats break Covid’s ban on returning home
Kongreska Maraykanka oo ansixiyay dhaqaale lagu caawinayo dadka uu saameeyay Covid 19
Inkabadan 300 oo ruux oo laga helay 48kii saac ee ugu dambeeyay cudurka Covid 19
Bangiga dhexe ee Soomaaliya oo markii ugu horraysay bixiyey Ruqsadda Adeegga Lacagaha Taleefanka